2. Siza kudlula kwiiZokhuselo kunye nokhetho onalo. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / benefits / 2. Siza kudlula kwiiZokhuselo kunye nokhetho onalo.
Imeko yomntu wonke yahlukile, kwaye ayizizo zonke izisombululo ezisebenzayo kuye wonke umntu. Isahluko 7 ukubhengeza kunokuba lilungile kusapho olunye, kodwa kuwe, inokubangela iTrust 7 Trustee efuna ukuthengisa ikhaya lakho. Ngaphandle kokuya ngaphaya kweenkcukacha ezingqonge imeko yakho asinakho ukubonelela ngezinto ezinokukulungela. Ukuba wenze imbuyekezo yemali mboleko kwixa elidlulileyo, siza kuqwalasela ukulungiswa kwemali mboleko yakho eyadlulayo kwaye ubone ukuba kutheni yaliwe, emva koko singenza iingcebiso ngendlela yokuvunywa. Siza kukuxelela nokuba umvuzo wakho awunakufane uvunywe okanye uyile isicwangciso sokonyusa umvuzo wakho. Ukuba ujonge ukukhusela ikhaya lakho kwinkundla, siza kudlula kuyo yonke imiboniso yeenkundla ukuze ubone ukuba unayo na into oyiphosileyo. Sinamatyala abandakanya inkonzo engalunganga, siphonononge imicimbi ephethwe ngokungalunganga, isenzo esingalunganga kunye nokunye okwakufuneka siwaphonononge amaphepha afakiweyo ngaphambi kokuba sitsho ukuba kukho ukuzikhusela. Siqinisekisa ukuba zonke iinketho zakho zichaziwe kwaye sigqitha kuzo zonke izikhuselo ezinokukunceda ufeze iinjongo zakho.